ဆောင်းလူ – ငါ … အကောင် | MoeMaKa Burmese News & Media
လင်းမိုးစွေ ● သက်သတ်လွတ်မရောင်းပါ
ဆောင်းလူ - လေ
ဆောင်းလူ – ငါ … အကောင်
ငါ … အကောင်
ဆောင်းလူ၊ ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၄
လက်တိုလက်တောင်း အခိုင်းရတဲ့ကောင် …။
အိမ်မဲ့ ယာမဲ့ကောင် …။
စာမတတ် ပေမတတ်ပေမယ့် ..
ငါ … အကောင်ပါလို့ …။
2 Responses to ဆောင်းလူ – ငါ … အကောင်
khin lunn on July 12, 2014 at 3:44 am
အ်ိမ်မဲ့ယာမဲ့ ငါလဲ အကောင် …
Kyaw Thein Htoo on July 17, 2014 at 4:32 pm
when I read it, I really like it. Then, I have read it again and again; I love it. I have many feeling after I’ve read it several times. Really good!